ပန်ဒိုရာ: ပန်းချီဆွဲတဲ့လက် - ၂
Posted by pandora at 3:44 PM
ချစ်မမပန် .. ဂျစ်လို ပန်းချီကို နားမလည်သူတယောက်တွက် ၊ ခုလို ရှင်းပြပြီး မိတ်ဆက်ပေးတာ ၊ သိပ်ကျေးဇူးတင်လို့ မမကြီးကို အာဘွားပေးလိုက်တယ်း)
ဒီပန်းချီကားကို မပန်ရဲ့ ရှင်းပြချက်နဲ့ ခံစားသွားတယ် ။
ကြည့်ရှုခံစားသွားပါ၏ ... မိုက်တယ်ဗျ ... :)
ပန်းချီဆွဲတဲ့လက်ကို လာကြည့်သွားပါတယ်၊ ပန်းချီကို ဒီလိုရှင်းပြနိုင်သူကလည်း ရှားသား၊ ကျေးဇူးဗျာ၊
That's great post. I wanna read that sort of post. Good job, bro.
ပန်ဒိုရာ ရေ.. ကျွန်တော်လည်း ပန်းချီကားကို ခံစားကြည့်ရှုသွားပါတယ်။ ရှင်းမပြရင် သာမာန်လိုပါပဲ၊ ရှင်းပြထားတော့မှ ပိုမိုအသက်ဝင်သွားတယ်။
လုဗ်ထဲက ပစ္စည်းတွေကို စီးရီးဆွဲ ဘလောက်မယ် စိတ်ကူးတုန်းက ဒီကားအကြောင်း လေ့လာပြီး ရေးမယ် တေးထားသေးတယ်။ စိတ်သွားတိုင်းတော့ ကိုယ်မပါခဲ့ဘူး။ အခုလို ရေးလိုက်တော့ အရန်သင့် ဖတ်မှတ်ရုံပဲပေါ့။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပိုစ်လေးပါ။ ကျွန်တော် မသိတာတွေတောင် ပါသေးတယ်